अनशन बसेको चौथो दिन देखि नै गम्भीर बन्दै गयो केसीको स्वास्थ्य – अभियान खबर
काठमाडौं । लामो समय देखि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आएका गोविन्द केसीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गदै डा. केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७ औं चरणको अनशन चौथो दिन पनि जारी छ । सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पताल नजिकै रहेको निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको घरको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा केसी अनशन बस्नु भएको छ ।
उहाँले राखेका मागमा डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बुधबार डडेल्धुरा पुग्नु भएका टोलीले डा.केसीले राखेका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय अगुवाहरुले सत्याग्रह स्थल पुगेर डा. केसीलाई भेट्दै ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति कर्णबहादुर मल्लले पनि सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ । यो सँगै अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
घरको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा अनशन बसिरहेका केसीको चिसोका कारण स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको हो । चिसोका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन थालेको र ब्लड प्रेसर घटेको डडेल्धुरा अस्पतालले जानकारी दिएको छ । अस्पतालका अनुसार केसीको ब्लडप्रेसर तलमाथि भइरहेको छ । बुधबार बिहान मात्रै दुई पटक केसीको स्वास्थ्य जाँच गरिएको थियो ।